सूचना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति २४ मंसिर २०७६, मंगलवार २०:१७ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको सिफारिस प्रक्रियानै असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता विष्णु लुइटेलले सिफारिस र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
मंगलबार दर्ता भएको रिटमाथि बुधवार सुनुवाई हुँदैछ । उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहम्फेको अध्यक्षतामा बसेको सिफारिस समितिको बैठकले प्रमुख आयुक्तमा डा.महेन्द्रमान गुरुङ र आयुक्तहरुमा कमला ओली तथा दीपक मैनालीको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सोही सिफारिस अनुसार मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले नियुक्ति गरेको भनिए पनि अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक जानकारी दिएको छैन । तर नियुक्तिको औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुनुअघि नै सिफारिस प्रक्रियानै संविधान विपरीत भएको भनेर रिट परेको हो ।
संविधान अनुसार सूचना आयोगका पदाधिकारीको सिफारिस सभामुखको अध्यक्षतामा रहेको समितिले गर्छ । समितिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र पत्रकार महासंघका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन् ।
यसपटक सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखलेनै सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेर सिफारिस समितिको बैठक राखेकी थिइन् । उनलाई सो अधिकार नरहेको भन्दै रिट परेको सर्बोच्चले जनाएको छ ।
सभामुखको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गरेको सन्दर्भमा अब सर्बोच्च अदालतबाटै संवैधानिक परीक्षण हुने भएको छ । बिधेयक प्रमाणिकरणबाहेक सभामुखले गर्ने सबै काम उपसभामुख तुम्बाहम्फेले गर्दै आएकी छन् ।
थपिने आश गरिरहेका बेला वृद्ध भत्ता हटाउने तयारीमा ओली सरकार
काठमाडौं । वृद्ध भत्ता बढ्ने अपेक्षा बढिरहेका बेला सरकारले भने वृद्ध भत्ता हटाउने तयारी शुरु गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिका छोराद्वारा आत्महत्या
क्यूबा । पूर्वराष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोका छोराले आत्महत्या गरेका छन् । क्यास्ट्रोका जेठा…
आज दान पर्व अक्षय तृतीया : शिव र पार्वतीबीच विवाह दिन
काठमाडौँ । वैशाख शुक्ल तृतीयाका दिन आज स्नान, जप, तप, हवन, दान गरी अक्षय तृतीया पर्व मनाइँदैछ ।
आजका दिन गरिएको…
काठमाडाैं । दोलखाको सुरक्षाका लागि स्थायी दरबन्दी लिएर आएको सशस्त्र प्रहरी बल गुल्मले बसोवासका लागि अझैसम्म उचित स्थान पाउन…
बलात्कार स्वीकार गर्नु तर डिएनए नमिल्नु रहस्यमय भएको भन्दै भेजाइनल स्वाबनै विदेश पठाउने तयारी !
काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भएको लामो समय भइसक्दा पनि वास्तविक दोषी पत्ता लाग्ना…